On server, waxa qaybinta Linux ayaan isticmaali karaa? | Laga soo bilaabo Linux
On server, waxa qaybinta Linux ayaan isticmaali karaa?
brodydalle | | Laga soo bilaabo Linux, GNU / Linux, Shabakado / Adeeg
Khabiir ku takhasusay aagga, waa su'aal badanaa la isweydiiyo. Daabacaaddu waxay noqon kartaa mid mugdi kujiro markii la raadinayo jawaab, runtu waxay tahay in qof kastaa uu leeyahay fikrad iyo khibrad u gaar ah oo ku saabsan mawduuca. Waxaad arki doontaa qaar ka mid ah sida ay u difaacayaan arrimaha sida amniga, helitaanka, maareynta, iswaafajinta, taageerada, waxtarka, waxtarka, iyo waxyaabo kale.
Waxaan halkan u imid inaan noloshaada fududeeyo.
Ok fikir daqiiqad khayraadka vs kharashka, waxaad isku aragtaa xaalad cakiran oo lacag ah. Khabiir ku ah aagga, waxaad ii sheegi kartaa in tani aysan ahayn dhibaatadaada maxaa yeelay si fudud uma aadan baran cilmiga dhaqaalaha, aad ayey uga yartahay inaad xisaabinta shirkadda ilaaliso. Laakiin taasi waa khaladkaagii ugu horreeyay, inkasta oo uusan ahayn beertaada, haddana si toos ah ayaa laguu saameeyay, maxaa yeelay adeege uma aha mid dhaqaale ahaan, aadna uga yar dayactirka iyo taageeridda qalabka, marka lagu daro mb kasta oo wan, mid kasta oo gb ah disk, mhz kasta Processor-ka iyo watt kasta oo ay isticmaasho waxay u taagan yihiin kharashka shirkadda, waana inaad si uun ugu sababeeysaa.
Kii iigu horeeyay talo soo jeedintu waa inaad iska ilaaliso inaad lumiso ilaha sida ugu macquulsan, markaa ha rakibin adeegyo aan loo baahnayn, iyo inaad tirtirto adeegyada ku yimaada sida caadiga ah oo aadan waligaa adeegsan doonin
Ok hada dhamaadka "hufnaan", Dhibaatada weligeed ah ee ay sida joogtada ah noogu dhaleeceeyaan, in haddii aan wax qabanno, ay na dhaleeceeyaan maxaa yeelay uma aanan u sameyn sidii ugu wanaagsaneyd.
Midkeygii labaad talobixintu waxay ahaan doontaa oo waa ilaa maanta (markaan daabaco qoraalkan)
Gentoo iyada oo ku saleysan kartidaada, aqoontaada iyo waayo aragnimadaada aad u leedahay, kuwa khubarada ah, waxay heystaan ​​waqti iyo u heellan inay ku dhisaan wax caado ah.
Debian loogu talagalay kuwa raadinaya xasilloon, heer sare ah oo iswaafaqsan, wax ku ool ah, nidaam deg deg ah oo ammaan ah
Hada Gentoo vs Debian, sifiican labadoodaba ma gelin laheyn giraan, waxay noqon laheyd sida is khilaafsan «Kawaran haddii xoog aan la joojin karin ay ku dhacaan shey ma guurto ah? " Aniga Debian waa awoodaas aan la joojin karin, Gentoo ayaa ah shayga aan dhaqaaqi karin.
Gentoo: Waad hubsan kartaa inaad nidaam u sameysay cabirkaaga, oo leh qaababka lagama maarmaanka u ah in lagaa dhigo qalabkaaga iyo codsiyadaada si sax ah u shaqeeyaan, waxaan ku taageersanahay nidaamyadan mowduucyada iyo xaaladaha sida adeegyada dibedda, jawiga wax soosaarka ee joogtada ah, amniga aadka u daran, kuwaaso iota kasta oo kheyraad ah biilka. (halkan kala soo bax). Waxaan dhigi lahaa dhibco 4.8 on qiyaasta ah 1 at 5 (sidoo kale waxba ma fiicna, ha i xukumin). Oo hadaad i waydiiso u qalantaa, eeg Maalinta aad maaraysid dariiqadan, abuuro bey'ado wax soo saar oo aad fikradahaaga ku qaabeyso qalliinkaan si aad u rumeyso, waxaad ku laaban doontaa boostadan si aad iigu mahad celiso.
Waxay leedahay qasaarooyinkeeda, marka hore waxay ubaahantahay aqoon. (dhibic) Haddii aan si cad u qoro sababta oo ah had iyo jeer waxa jira sheybaarka cilmiga leh oo odhan doona waa gabal keega, maya, kuwa bilaabaya waxay u noqon doonaan hawl dhib badan, kuwa ka imanaya deegaanno hore loo soo diyaariyay waxay noqon doonaan kuwo xoogaa dhib badan kuwa ka yimaada daaqadaha windows-ka ee u eg Linux sida ubuntu malaha waa inay laba jeer ka fikiraan.
Wax aad ugu badan softiweerka bilaashka ah ee ay taageeraan ama aysan taageerin jaaliyadaha, iyadoo lala kaashanayo horumarin iskaashi, ayaa ah balastarro amni, kuwaas oo badiyaa ah kala-badh xalkuna u muuqdo in la raacayo, markaa waa inaad ururisaa oo aad cunaysaa kheyraad markasta oo aad tagto. xirmo. Mana ahan in Gentoo uu sii joogay da'da dhagaxa, wax walba waxaa loo maraa amarro fudud, "soo bax" waxay qabataa xirmooyinka binary iyo ilo (ilo), laakiin runta ayaa ah in nidaamka ka dambeeya amarkani uu yahay mid la soo uruurinayo tanna waqti ayey qaadanaysaa waxayna cunaysaa kheyraadka.
Waqtigan xaadirka ah kama hadli doono wax badan oo ku saabsan mawduuca, maaddaama qoraa ka tirsan isla boggan uu sameeyay maqaal aad u wanaagsan "Gentoo runta ka dambeysa sheekada"
Debian: aan jeclaaHadday saas tahay, waxaan ku siiyay khudbadii hore hadana waxaan ku idhi kani waa kaan ugu jeclahay, samir oo akhri. Xasiloonida, taageerada iyo iswaafajintu waa kaliya 3 ka mid ah astaamaha aad arki doonto markaad isticmaasho. Debian fikirkeyga shaqsi ahaaneed sida pimp, pimp, adduunkan kumbuyuutareedka iyo softiweerka bilaashka ah, waa xasilloon tahay, fududahay in la maareeyo, fududahay in lala qabsado dhammaan noocyada dhismaha hadda jira (cusub ama duugoobay), waa la taageerayaa qaddar ahaan, wiki, bulshooyin, fagaareyaal, shirkado (lacag bixin), waxaad iskaga taageeri kartaa bogagga kale iyo taageerooyinka sida ubuntu, Linux-mint, iwm. Waxaan dhigi lahaa dhibco 4.5 on qiyaasta ah 1 at 5
Hadda waxaan horey kuugu sharraxay inay wax waliba leeyihiin meeshiisa iyo waqtigiisa. "Wax walba waxay ku xiran yihiin". On server ah, ma aad ku rakibi doonaa Debian gnome ama Debian kde, MAYA! Waxaad ku rakibaysaa net-rakibida qaybinta micro(halkan kala soo bax), iyada oo ah tan ugu muhiimsan si aad uhesho qalabkaaga, meesha laga yaabo in inta lagu jiro rakibidda aad u baahan tahay inaad ku xirato qaar ka mid ah qalabka wax lagu seexdo iyada oo loo marayo qalab dibadeed (tusaale ahaan pendrive), laakiin waxaad hubin doontaa inaad haysatid qalab lagu rakibay qalabkaaga.
Codsiyada sida server-ka, shaqooyinka, faylka faylka, serverka daabacan, server mail, wakiil, fariin deg deg ah, gidaarada, router-yada, iyo liistadu way socotaa oo waa socotaa, halkan ayaa laga heli karaa hal amar-qaadasho ama karti.
EMPHASIS HALKAN KA DAMBE
Deegaanada caanka ah sida saamaxaadda oo leh xen, qemu iyo kvm, OpenStack oo aad caan u ah, iyo kuwo kale, waxay si buuxda isula jaanqaadayaan oo ka sarreeyaan wax walba oo sahlan in la habeeyo.
Fudud, hadda sida maamule adeege, injineer ama farsamo yaqaan, waa inaad safka hore kaga jirtaa, hadda kani waa mustaqbalka "Wax-u-qabashada", "Daruur", Maareynta ilaha durugsan oo tuuji dhibic kasta oo ugu dambeeya ee serverka, u rogaya 50 ama in ka badan oo server ah.
Waxay ku weydiinayaan adeege leh astaamo gaar ah, disk disk, Memory wan, processor, systemka, iwm. 5 daqiiqo kadib durba waxaad abuurtay adeegaha, jawi saaxiibtinimo leh oo lagu kalsoonaan karo oo loo yaqaan Debian. Kadib waxay kuu sheegayaan in dalabku yahay mid aad u suganinaad ficil ahaan iska tuurtid furaha qufulkaas markaad albaabkaas xirtid, adiga waad timi oo waxaad ku rakibtay Gentoo mashiinkaaga casriga ah.
Waxay kuu soo wici doonaan 50 sano ka dib si ay u xiraan server-yadaas maxaa yeelay wali way shaqeynayaan.
Waa hagaag ragga iyo halkan waxaan u furayaa albaab kale oo loogu talagalay boostada mustaqbalka, Wax-qabad. Sida had iyo jeer su'aal kasta, waxaan sugayaa faallooyinkaaga ama farriimahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Laga soo bilaabo Linux » On server, waxa qaybinta Linux ayaan isticmaali karaa?
Faallo ka bixi qayb 10 sano ah oo la shaqeynaya server.
Centos waligey dhibaato iima siin.
Debian 2 hoos (labadaba debian 5).
Gentoo tallaabada xigta
Saamiga Centos / Debian bilowga 50/50 hadda 70/30
Ku jawaab pancho
Waad ku mahadsantahay faalladaada. Dhankeyga, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad isticmaaleyso CentOS linux, horey waan iskuday waana jeclahay, waxaan jeclaan lahaa inaad ii soo qorto khibradaada CentOS iyo Debian ka saarida e-maylkeyga si aan dib ugu eego mawduuca oo iga caawiya inaan waxbadan u kobciyo akhristayaashayada ... Ka dib, sidaan ku qoray boostada, waa talo soo jeedin ku saabsan fekerkeyga xirfadeed iyo shaqsiyeed, boostada waxaa cinwaan looga dhigay "Waan awoodaa", waajib ma aha.
Ku jawaab BrodyDalle
Waxaan ka walwalsanahay inaan ku rakibo Gentoo kombiyuutar duug ah oo aan haysto, dhibaatadu waxay tahay in markasta oo aan isku dayo sabab uun ay u shaqayso. Waxaan rabaa inaan ka boodo Arch ilaa Gentoo
Hahaha, ma tihid kii ugu horeeyey mana noqon doontid kan ugu dambeeya ee isku daya oo ku fashilma Gentoo. Laakiin ha niyad jabin halkan soo gal https://wiki.gentoo.org/wiki/Handbook:Main_Page/es Xulo qaab dhismeedka kombiyuutarkaaga oo raac talaabada tusaha talaabada. Waxaa jira 11 talaabo oo kabadan ama kayar, waxaan kugula talinayaa inaad kubilaabato mishiinka kumbuyuutarka ah ee faylkaaga kujira, dabacsan, sabir, kafee iyo buskud, qor talaabo kasta oo guuleysata (hadiiba aad daasho oo aad maalin kale u dhaafto). Marka ay tahay guul, ku celi hawsha ugu yaraan 3 jeer. Waxaan balan qaadayaa inaan sameeyo tilmaame sida loo rakibo Gentoo deegaanka x86 iyo x86_64
Waxaan ku isticmaalaa kombuyuutaro sida pentium III iyo powerpc dhibaato la'aan ..!
Wow, balooggan ayaa inbadan iga sii yaabiya.
Waad mahadsantahay, si dhow ula soco balooggan
Xulka wararka oo dhan dijo
Way tabeen, hehehe
Ku jawaab MexicoicanJuaker
Waad ku mahadsan tahay kaqeybgalkaaga, u qor emaylkeyga khibradaada shaqsiyeed ee ku saabsan bey'adaha wax soo saar ee qeybintaas, si fiican in kastoo asal ahaan ay ka wada yimaadaan RedHat, laakiin waxaan qirayaa in aanan weligey arag server leh fedora, aaaaah geez. Hagaag RedHat waxaan horeyba usheegay qoraal goor dhaw la qorsheynayo. Oo yaanan ka hadal Bugbutu hadda XD
Waxaan ugu codeeyaa jagadaas tilmaanta si loo rakibo gentoo ... Waxaan rakibay qaanso qiyaastii 3 sano walina wali waa la mid halkaa ... Laakiin way fiicnaan laheyd in lagu rakibo Gentoo mashiin kale
Wiki-ga waxaa ku jira dhammaan tillaabooyinka lagu rakibo.
Jawaab Juan Pedro
Jose Viera dijo
Waxaan ugu jeclahay server-yada: CentOS
Miisaan khafiif ah, xasiloon, xasilloon kuna saleysan RedHat, shirkadda inta badan wax ku biirisa kernel-ka Linux.
Jawaab José Viera
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga, waxaan rajeynayaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan email-kayga. Dhawaan waxaan dib u eegis ku sameyn doonaa RedHat iyo waxyaabaha ku soo kordhay ee deegaanka wax soo saarka.
Marka hore, aad baad ugu mahadsantahay sidaad aqoontaada ula wadaagtay. Waxaan u qaabilaa si yaab leh.
Waxaan u imid baloogga sababta oo ah waxaan raadinayay macluumaad wixii ay iga codsadeen inaan sameeyo: in aan dhiso server (hadda waan ogahay in Debian uu yeelanayo). Waxaan haystaa kun shaki, markaa hadday suurtagal tahay waxaan jeclaan lahaa inaad igu hagto xoogaa dhawr talo bixin kahor intaadan wax iibsan.
Moodle waa inuu ku shaqeynayaa kumbuyuutarka fikradduna (marka laga reebo soo-jeedinta ugu fiican) in la sameeyo kombiyuutar taageera jawiga dhaqan-celinta.
Taasi waa sababta aan ugu fekero koox leh astaamahan:
- processor i7
- Xusuusta: 32 GB (haddiiba ay dhacdo)
- Xigasho: 600w
Waa inaan u diyaar garoobaa si aan uga shaqeeyo duulaanka ugu yaraan 2 saxan oo 2 TB ah (ama ka badan). Shaki ugu horeeya:
Kaarka kontaroolada duulaanka ah keebaa ugu wanaagsan iswaafajinta Debian? ama waan iibsan karaa wax kasta oo jaanis ah.
Ma u baahan tahay inaad haysato kaarar badan oo shabakad ah? maxaa yeelay waxaan jeclaan lahaa inaan ku shaqeeyo dhowr server moodle ah isla mishiinka.
Waxa ugu dambeeya, waa maxay jawiga waxtarka leh ee aad ku talinayso ee fudud oo xasilloon.
Waad ku mahadsantahay milyan kahor fadlan markasta sii wad blogga.
Bueeeeh oo ah "guud", waa inaad isiisaa faahfaahin dheeri ah, waaya aragnimadayda shaqsi ahaaneed dhammaan ilaaliyayaashu waxay weeraraan aacraid (adaptec) iyo hpsa (hp) shaqada (waa tan ugu badan dalkeyga), sidoo kale dell megaraid. Laakiin ha i aaminin, u kac boggan oo indhahaaga ku khiyaamee https://wiki.debian.org/LinuxRaidForAdmins .
Arrinta dhinaca hufnaanta ayaa ah in si wanaagsan loo maareeyo ilaha, way iska cadahay inaad ka heli karto 100 server moodle ah isla shabakadda, laakiin waxaad lahaan lahayd cidhiidhi. Waa inaad qiimeysaa qadarka taraafikada aad damacsan tahay inaad hesho.
Waxaan aaminsanahay in labadan erey aysan is barbar socon marka laga hadlayo dhanka suugaanta bilaashka ah, Virtualbox-ka waa fududahay (in kasta oo uusan aheyn mid aad wax ku ool ah) laakiin shaqadiisa ayuu qabtaa. Ehel ahaan fudud waa kvm iyo qemu. Heer yar oo dheeraad ah oo aan lahayn garaaf garaaf ah ama waa inaad rakibataa xen gui dheeraad ah.
In Server CentOS / Rhel & freeBSD ma jiraan wax intaa ka badan!
Weli ma arko nimcada loo yaqaan 'gentoo', sababtoo ah waxay rabaan inay ka fiicnaadaan ka dib isticmaalka Arch qaar ka mid ah waxay aadaan Gentoo?
Waan rakibay walina ma arko dhibaatada rakibaadda, taas caksigeeda waxaan dareemayaa inay tahay nidaamka igu kalifay inaan lumiyo waqtiga ugu badan, dunida Linux, ma waxaan qaadaneynaa in kabadan 7 saacadood rakibid leh i7? iyo waliba cusbooneysi bishiiba mar oo aad qaadatid 8 saacadood? mahadsanid laakiin sheygaas ilama socdo. Waxaan u baahanahay wax si dhakhso leh uma aha qoolley markaan wax rakibayo. (ahhh laakiin waxaad haysataa labada nooc, ahhh laakiin waxaa laga yaabaa inaadan haysan calammada sida saxda ah loo qaabeeyey, ahhh laakiin marinkan ahhhh ……… ..) iyo kan xawaaraha waa ujeedo Arch waxay igu qaadataa 8 ilbiriqsi si aan ugu jiro biraawsarka qaybtee, Gento waxay qaadatay 15-20. Sidaa darteed xawaare waa shakhsi.
Kuwa ka mid ah server-yada fashilmay ee aan arkay, weligay ma arkin CentOS leh dhibaatooyin, dhibaatooyinku waxay ka jiraan Debian iyo Ubuntu.
Laakiin ma u hadashaa sidii isticmaale ama milkiile server ama kombiyuutar desktop ah? Marxaladda 3 mar horaba waa lasameeyay, kaliya waa inaad uruurisaa kernel-ka, cajaladda, iyo korontada aad ubaahantahay. Goorma ayay qaadatay 7 saac iyo 90 digrii? Waxaan rajeynayaa inaysan soo ururinaynin Gnome iyo maktabaddeeda naxdinta leh: libwebkitgtk
Maxaad u xustay Arch iyo biraawsar markii qoraalkani ku saabsan yahay serverka?
Waxaan hayaa server leh centos kvm, lvm, oo wata mashiinno farshaxan ah, hadaan raali galin ka bixiyo inaanan naftayda ka sheekayn, waxaan ka hadlayaa desktop iyo haa, waxay la jirtay gnome, oo ah deegaanka aan isticmaalo. Arch tbm wuxuu u shaqeeyaa serverka, xitaa saaxiibku wuxuu leeyahay mashiinno farsameed oo ku shaqeynaya qaansoley inkasta oo aanan u adeegsan lahayn server.
Ma ihi taageere weyn oo ubuntu XD ah ... ma ahan sababta oo ah way xun tahay, waxaan u maleynayaa inay qabatay shaqo aad u fiican sida lint mint oo dadka u keenta linux, laakiin maxaa yeelay shaqadaydu waa server ...
Waxaan u maleynayaa inaan abuuray xoogaa khilaaf ah, waxaan ku bartay laanta Debian, in badan oo idinka mid ah oo wax qora, waxna ku bartay RedHat. ClearOS ma xuma, aniga lafteyda ayaan isku dayay waana jeclaaday, waxaan sameyn doonaa qoraal ku saabsan Clear on server hahaha.
Ku saabsan Gentoo, WOW 7 saacadood oo server ah? oo leh hufnaan? Adeeg noocee ah ayaad u maleyneysay inaad rakibtay oo kugu qaadan kara 7 saacadood? Waxaan u maleynayaa inaad ka hadlaysid kiis gaar ah oo kombuyuutarka kumbuyuutarka ah.
Uma isticmaali laheyn ubuntu serverka inkasta oo ay ka mid tahay apparmor. Waxaan doorbidayaa SElinux, waxaan wax kusoo bartay koofiyad cas intaanan ganacsiga bilaabin, malaha taasi waa sababta aan kaliya u isticmaalo rhel iyo centos xD, debian xiriirkaygu weligiis ma fiicnayn laakiin taasi waa sheeko kale. Waxyaabaha Gentoo waxay ku jireen kombuyuutarkeyga shaqsiyeed, waxaan qaatay 6 bilood ka dib waxaan dib ugu noqday qaanso. Xitaa sidaa darteed waxaan dareemayaa inaad ku dari lahayd Rhel iyo waxyaabaha ka dhalan kara, internetka waxaa jira xoogaa cibaado ah oo udhaxeeya in Rhel ama Debian xD ay kafiican tahay, ahhh tan kale waxay tahay in freeBSD tbm ay tahay ikhtiyaar wanaagsan laakiin sifiican tani waxay ka timid kaliya Linux distros.
Waxaan arkaa inaadan haysan falsafadda binary-ga la soo uruuriyey ee lagu soo ururinayo qalabkaaga. Amniga, ilaha qalabka sifiican loo isticmaalay iwm
Waqtiga aan lahaa gentoo ma dareemin wax farqi ah oo u dhexeeya qiimaha xawaaraha vs arch. Iyo haddii aan fahmay tan "u ururinta nidaamkaaga" laakiin sidii aan idhi wax farqi ah uma helin xawaaraha. Dhanka kale, ma haysto waqti aan wax walba ku soo ururiyo. Weli waxaan isku dayaa inaan fahmo kuwa adeegsada saliida laakiin kiiskeyga kamaan hor istaagin wax faa iido ah, taa cagsigeeda waa inaan fiiriyaa sida CPU-du iigu kacday heerkulka xitaa 90C °, marka mahadsanid laakiin taas waan dhaafey.
Tayo aad u wanaagsan oo ka mid ah qodobbada ugu dambeeyay
mahadsanid, halkan iila soco
Waxaan runtii aad u jeclaa boostada (halkan cusub) oo ay weydiinayaan kuwa ku saabsan wax-u-qabashada heerka serverka, waxaan kugula talin lahaa proxmox, oo aad u fudud in la rakibo, kaliya kakan si loo dhiso kooxo iyo jawi faiil ah, laakiin ma jiraan wax khaas ah. U adeegso qemu (kvm) si aad mashiinnada uga shaqeyso una furto furitaanka wax ka qabashada jawiga Linux.
Salaan buuxda oo lagula taliyay
CoreOS, docker, faa'iido.
Wixii ay damacsan yihiin inay adeegsadaan Gentoo, waxaan u aaday FreeBSD + Pudriere + Pkg, maxaa yeelay uma muuqato inay ku habboon tahay in wax lagu soo ururiyo server, waa qashin-u-qaadashada kheyraadka ku jira bey'adda helitaankeedu yahay 100%. Dhamaadka kale, CentOS, ka dibna Debian.
Jawaab J. Gelbes
bueeeeeeh Waxaan u maleynayaa inaan taas sharraxayo, oo aanan u arkin inay waxtar leedahay in la dhigo Gentoo server-ka laakiin aan ku rakibo mashiin farshaxan adeeg qaas ah ... Waxaan u maleynayaa inaadan cusbooneysiin doonin Apache server-ka shirkaddaada maalin walba, waxaad maalin uun joojin doontaa ka dib markaad tijaabiso cusbooneysiinta tayada (tijaabada) ama serverka horumarinta
Waxaan idhi waa maxay ra'yigeygu, hadii ay tahay server waa inaad u dhawaataa 100% iyo eber guul darrooyin. Dhinaca kale saaxiibka, hadafka ujeedada dooda, mashiinka aaladda casriga ah ee bixisa adeeg waa sax "adeege", ma ogolaaneyno in adeegga webka uu joojiyo in la helo nus saac kaliya maxaa yeelay waa VPS halkii laga heli lahaa server jirka ah , fadlan.
Jawab J. Gelvez
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, horeyba waan u aqriyay dhamaan faallooyinkaaga, waxaan raadinayaa Linux si aan ugu dhigo server ahaan pc, iyo inaan awood u yeesho inaan isticmaalo nidaamka webka, diiwaanada, warbixinnada, ee shabakad, oo aad igula talin lahayd, gaar ahaan tixgelinta qof isagu waa sida, doonaya inuu wax barto. Salaan.
Ku jawaab Carlos Rodríguez
Xaqiiqdii CENTOS waa tan ugufiican deegaanka serverka, xaqiiqdii way ka fiican tahay Red Hat inkasta oo ay ka soo baxayso qaybintaas. CentOS waxay xor u tahay xasilloonida.
Lester Bolanos dijo
Waxaan hayaa qaar ka mid ah mashiinadii hore ee PIV oo aan rabo inaan u adeegsado sidii e-learning server, oo leh claroline, laakiin waxaan horeyba isugu dayay qaybinta Linux badan, ubunti 9.04 10.04, server, debian 8, 9 mana aanan helin natiijo fiican. Meelaha keydka lagu keydin karo mar dambe lama soo dejin karo ama ma heli karo darawallo, ma jiraa nooc Linux ah oo i caawin kara? Waxaan rabaa inaan ugu deeqo serverka iskuulada qaar….
Jawaab Lester Bolaños
Ku nadiifi nidaamkaaga GNU / Linux adigoo adeegsanaya Bleachbit 1.10
Tilmaamaha Amniga ee Linux (Server) (Qeybta 1)